AKHRISO: Somaliland oo diiday Mashruuc lagu saxiixay Muqdisho in laga fuliyo Berbera.
HARGEYSA(P-TIMES) – Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda Qorsheynta & Horumarinta Somaliland ayaa si rasmi ah loogu sheegay in mashaariicda Horumarineed ee lagu helo magaca Soomaaliyeed aan marnaba la siyaasadeyn karin, isla markasna mashruuc siyaasadeysan oo lagu saxiixay Muqdisho aan laga fulin karin deegaanada Somaliland.
Wasiirka qorsheynta & Horumarinta ee Somaliland Sacad Cali Shire oo ku saxiixan qoraalka soo baxay ayaa lagu sheegay in dawladda Faderaalku aysan ka fulin gudaha maamulka Somaliland mashruuca ay ku saxiixday magaalada Muqdisho, kaas oo loogu magac-daray Eng Yariisow lagana fulinayo Berbera & Muqdisho.
Somaliland, waxay sheegtay in aysan marti uga aheyn dawladda Soomaaliya kaalmada caalamiga ah ee lagu helo magaca dadka deganka Geeska Afrika ee Soomaaliyeed, Somaliland-na ay qeyb ka tahay dadka loogu talo-galay.
Warsaxaafadeedka, waxaa lagu sheegay in uusan jirin mashruuc lagu magacaabo Eng Yariisow oo laga fulinayo deegaanada Somaliland, lagana fulin karrin oo ay tahay mid ku kooban dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Somaliland, waxay sheegtay in ay Midowga Yurub kala shaqeynayeen mudo dheer mashaariic horumarineed oo ku wajahan xagga xeebaha, kaas oo hadda markale ay kala saxiixan doonaan Midowga Yurub & Somaliland, balse uusan marnaba soo mareyn Muqdisho.
Wasiirka qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xassan ayaa dhawaan saxiixay mashruuca Horumarinta Midowga Yurub ee laga fulinayo Berbera iyo Muqdisho, kaas oo loogu magac-daray Eng Yariisow, waxaana xagga Somaliland wax looga qabanayaa awooda dawladda Hoose ee magaalada xeebta kutaala ee Berbera.
Xiisad culus oo ka dhex taagan dowladdaha Turkiga & Ruushka